Ranbir Kapoor iyo Katrina Kaif oo markale shaashada kawada soo muuqan doona | alcarabiya.com
Home » Entertainment » Ranbir Kapoor iyo Katrina Kaif oo markale shaashada kawada soo muuqan doona
Ranbir Kapoor iyo Katrina Kaif oo markale shaashada kawada soo muuqan doona	Waxa la shaaciyay in atariishada muuqaalka qurxoon ee Katrina Kaif iyo atooraha aan ka dhicin ee Ranbir Kapoor ay mar kale shaashada iskala soo muuqan doonaan, waxaana labada jilaa ay markaan sameynayaan xayeysiin.
Mid kamida wargeysyada maalinlaha ah ee kasoo baxa India ayaa lagu qoray Katrina iyo Ranbir mar kale in ay isku dhici doonaan, waxa ayna xayeysiin doonaan Saliidda Timaha iyagoo ku qaad doono lacag aad u badan.
Ranbir Kapoor iyo Katrina Kaif ayaa siwada jir ah u wada sameyn doono xayeysiin, dhiilka ay laga leen shirkadda ayaa kadhigi doona kuwa ugu qaalisan ee Film-star ka lamaayaasha adduunka ee iibgeeya aflaanta.
Marar badan ayay labadaan jilaa soo wada shaqeeyeen, iyadoo xitaa xantoodu gaartay iney is jecelyihiin balse aanu ahayn mid shaac baxsan , sikastaba ha ahaatee waxa ay ka dhawaajiyeen inaan wax xiriir jaceyla ka dhexeeynin labadooda.
Intaba badan atoorayaasha iyo atariishadooda ayaa leh xiriiro jaceyl oo hoose balse waa ay beeniyaan , iyagoo qaar kamid ah ay marka danbe soo shaac baxdo in uu xiriir wanaagsan kadhaxeeyo.
One Response to Ranbir Kapoor iyo Katrina Kaif oo markale shaashada kawada soo muuqan doona	Mohamed Reply
February 9, 2013 at 9:11	Katrina iyo wixi lamid ah an waso